ကောင်းကင်ကို: ခောတ်ကအတင်းရေးခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ခောတ်ကအတင်းရေးခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အကြိမ် ၃၀ မြောက်သတိပေးဖို့ 
ရှိလျက်နဲ အဖျောက်ခံထားရတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ရှာဖွေရင်း
အချိန်တွေကို မီးရှို့ ပစ်ခဲ့လိုက်ရတဲ့ ဒေါင်းတစ်ကောင်ဟာ
ငါဟာ အပြုံးငှက်ကလေး အမေ့မျက်နှာပေါ်မှာ ခိုနားတာမြင်ချင်သလို
ကျောင်းနားတဝိုက်လေပြေက ခွပ်ဒေါင်းအလံလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တာ မြင်ချင်တဲ့သူပါ။
ဆန့် ကျင်ဘက်လိုဖြစ်သွားရတဲ့အိပ်မက်တွေက ကာရံထားတဲ့ နံရံတွေကြားမှာ
အသည်းနှလုံး နှစ်ခုနဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
ခုချိန်ထိအမေ့အတွက် နို့ တစက်ဖိုးတောင် မကျေနိုင်သေးသလို
ရန်သူကိုခွပ်မယ့် ငါ့ရဲ့အတောင်ပံဟာ
မင်းကလည်း ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မင်းရဲ့ ရင်သွေးတွေအတွက် မင်းရေစီးသံတိုးတိုးလေးနဲ့ မင်းဘာသာမင်းငို၊
ငါကလည်း အနှစ် ၃၀ လုံးလုံးမေးခိုင်နေခဲ့ရတဲ့ ငါ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုကိုက်ပြီး
မင်းကိုဆယ်မယ့် ငါတို့ ရဲ့ လက်တွေ
မိစ္ဆာတွေလက်ချက်နဲ့ 
မင်းသွေးကြောထဲ အဆိပ်ခတ်တဲ့လက်တွေကို ဖြတ်ဖို့ 
Posted by Kaung Kin Ko at 9:29 PM
ကိုကောင်းကင်လည်း ဒီဇင်ဘာမှာမွေးတာပဲပေါ့နော်။ မွေးနေ့က ဘယ်တော့လဲဟင်။ မုန့်လေးဘာလေးလည်း ကျွေးဦးပေါ့နော်။ သဲတို့ကလည်း ဆုတောင်းပေးမှာပေါ့။ ဂျပန်မလေးနဲ့တူတဲ့ ကောင်မလေးရပါစေလို့။
ခောတ်ကအတင်းရေးခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဖွင့်လျက်နဲ့ ပိတ်နေခဲံတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ရှိလျက်နဲ့ အဖျောက်ခံထားရတဲ့ ဒေါင်းတစ်ကောင်ဟာ ငါပဲဖြစ်တယ်။ ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အဆင်ပြေပါစေ အကိုရေ
red bodhi said...
ခေတ်ကအတင်းရေးခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သိပ်လှတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ..။ ကဗျာကလှပေမဲ့ အကြောင်းအရာ နောက်ခံ ခေတ်တခုလုံးကတော့ ကြေမွနေတယ်..
very very great poem!!!...bro....
အဆိပ်ခတ်တဲ့လက်တွေကို ဖြတ်ဖို့ 
ဓားလိုထွက်အောင်သွေးနေတယ်ဆိုတာ အားမာန် အပြည့်ပါတယ်ဗျာ နှုတ်ခမ်းတွေကိုကိုက်ပြီးငါ့ကဗျာတွေနဲ့ ငါငိုနေတဲ့ အသည်းနှလုံး နှစ်ခုနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ရင်းအပြုံးငှက်ကလေး အမေ့မျက်နှာပေါ်မှာ ခိုနားတာမြင်ချင်သလို ကျောင်းနားတဝိုက်လေပြေက ခွပ်ဒေါင်းအလံလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တာ မြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေး မြန်မြန်ပြည့်နိုင်ပါစေလို့ ခရစ္စမတ် ရာသီရဲ့ အကြိမ် ၃၀ မြောက်မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်းလေးအနေနဲ့ ဘယ်နေ့မှန်းမသိတဲ့ ကောင်းကင်ကိုရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မှန်းပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်
အကြိမ် ၃၀ မြောက် နတ်တော်မှာ မြူနှင်းပါးပါးထဲက အမေ့ရဲ့ အပြုံးတွေနဲ့အတူ ဧရာဝတီရဲ့ ရင်သွေးတွေကို ဆယ်ယူနိူင်တဲ့ ရင်ဝေးဌက်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါစေလို့ ...
အခုတော့ ရင်ဝေးဌက်ပေါ့အစ်ကိုရေ ...။
အကို့ ကဗျာတွေက တာရာမင်းဝေနဲ့ အပြိုင်ကို ဝေဆာလှပနေပါလား။
ဒီကဗျာကတော့ ဖတ်ပြီး စိတ်ညစ်မိခဲ့ရပါတယ်။
တက်ကြွသွားတယ်.. ကြွတက်တာ ဟုတ်ဘူးနော်
မိုးမခ မှ အိုးဝေ ရဲ့ ကာတွန်း(Cartoon)
တောင်ကြီးမီးပုံးပျံပွဲ (Taunggyi Ballon Festival 2...
တောင်ကြီး မီးပုံးပျံပွဲ (Taunggyi Ballon Festival ...
ပါကစ္စတန် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဘနာဇီယာ ဘူတို လုပ်...
Burma's Secert War
ကိုမိုးသီး blog မှ နောက်ဆုံးရ Video(ရက်စက်မှုမှတ်တ...
ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ အရှင်ခေမာစာရ ရဲ့ မိန့် ကြားချက်...
ခွပ်ဒေါင်းတို့ ရဲ့ ရင်ခုန်သံ
စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ စစ်သားတို့ ရဲ့ ဘဝ...
One student killed by Thai soldier
Worse situation with elder beggers in Burma
ငါတို့ ရေးမယ့် နေတစ်စင်း
Burma landmine victims
The road movie Trailer(Human Right Video)
ထောင်တွင်းအတွေ့ အကြုံ (၂)
(VOA Burmese)Video News
The children on Thai-Burma border
Tell about monks in Jail (မင်းကိုနိုင်ရဲ့ သူငယ်ချင...
Tell about Monks in Jail (Part 2)
Tell about monks in Jail (Part 3)
၁၉၆၂ သမဂ္ဂအဆောက်အဦး ဖြိုချခံခဲ့ရတဲ့7July အရေးအခင...
(ကျောက်မျက်မှောင်ခိုကုန်ကူးခြင်း)Gem trafficking: ...
Computer Effect (သွေးစွန်းသောအိုလံပစ်) (776 B.C. ...
ဒုက္ခသည်များရဲ့ ဘဝ (ဒေါက်တာဒေါ်စင်သီယာမောင်နှင့် အင်...
Christian Freedom International Revised(Warning: I...
VOA Video News(အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့...
ငါတို့ ဖန်ဆင်းထားတဲ့ မြစ်
SHOOT ON SIGHT(Refugee)